WhatsAppCallEnabler: ampandehano ny antso WhatsApp amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
WhatsApp dia mbola tsy nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fandefasana ny serivisy fiantsoana VoIP, na izany aza, anio dia manome tweak anao izahay izay hahafaly ireo izay tsy afaka miandry. WhatsAppCallEnabler dia mampihetsika ny antso WhatsApp amin'ny iPhone alohan'ny olon-kafa mba hahafahanao mankafy ny serivisy antso WhatsApp efa nandrasana hatry ny ela, izay tsy isalasalana fa hanamarika a mialoha sy aorian'ny tontolon'ny telefaona finday.
Noho ny fiovaovan'ny iMokhles, afaka mankafy antso amin'ny WhatsApp izao ireo mpampiasa iPhone. Ny tweak dia misy amin'ny fitoerany manokana. Na izany aza, ireo mpampiasa izay mampandeha azy ireo amin'ny fitaovany ihany no ho afaka handray antso, noho izany ireo izay nampiasa ity fanovana ity ihany.
Ho fanampin'ity fanovana ity, Ny WhatsApp koa dia manomboka mihetsika tsikelikely ny fiantsoana feo ho an'ireo mpampiasa ny kinova beta farany an'ny WhatsApp ho an'ny iOS. Mamela horonan-tsary amin'ny antsipiriany izahay hahafahanay mankasitraka io asa nandrasana hatry ny ela io.
Etsy ankilany, mbola tsy afaka manao fandalinana henjana momba ny kalitao sy ny fihenan'ny antso isika noho ny faharetan'ity serivisy ity, kanefa, noho ny fivoaran'ny WhatsApp mahazatra, afaka manantena ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra izahay. Momba ny famakafakana ny interface interface eto dia lazainay anao ny pitsopitsony rehetra omaly, toy ny mahazatra ao amin'ny Actualidad iPhone.
Fifampifanarahana: iOS 8
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » WhatsAppCallEnabler: ampandehano ny antso WhatsApp amin'ny iPhone-nao
Joan Manuel dia hoy izy:
Tsy mandeha aloha
Valiny tamin'i Joan Manuel
Eny, tsy mandeha izy io, misy hafatra iray milaza fa ny olona iray hafa dia tsy maintsy manavao ilay app, na dia apetraka aza ilay tweak ary samy navitrika
Kops79mx dia hoy izy:
Afaka niantso android aho, saingy tsy manaiky ny iPhones
Valiny amin'i Kops79mx
Tonga ireo antso ho an'ny iPhone Nanandrana azy aho tamin'ny fiantsoana avy amin'ny s4 fa raha hiantsoana avy amin'ny iPhone dia tsy mivoaka ny antso ary mandefa ilay hafatra tsy tratra
Ho an'ny antso android dia tsy azo ampiasaina intsony, 4 ora fotsiny no nomeny mba hampavitrika azy ireo ary nosakanany
nitroal dia hoy izy:
Onja ratsy izaitsizy miaraka amin'ny whatsapp, toy izany koa misaotra anao ary raha manana vaovao momba ny famelana ny activation ho an'ny android indray ianao dia tiako raha ampahafantarinao ahy izany.
Mamaly an'i nitroal
cecila benavides dia hoy izy:
Mamaly an'i cecila benavides
Tsy miasa intsony ny antso
Ry zalahy, tadidio (raha efa nahita ny horonan-tsary ianao) fa raha hampavitrika azy ireo dia ilaina ny mametraka ny beta farany farany ary mihetsika ilay tweak avy amin'ny sehatra 😀 Misaotra ny vaovao Miguel!
Mbola tsy mandeha io, apetrako amin'ny iPhones roa aho ary misy hafatra mivoaka miantso ary tsy mivoaka ny antso, amin'ny farany misy hafatra hafa tsy tonga antso ary ny antso iPhone dia tsy nivoaka mihitsy.
Tsara ny tolakandro, afaka misy miantso ahy ve hampihetsika ny antso waasap…. + 34 631 91 79 93
Juana Ramirez dia hoy izy:
Salama, Juaniz aho
Valiny tamin'i Juana Ramirez
Afaka miantso ahy ve ny olona: +504 89817806
Raha azonao atao ny miantso ahy azafady, ny numero +59167986109, misaotra betsaka mialoha.
Salama whatsapp activations ho an'ny android dia efa misy… ireo mila fanampiana mandefa hafatra amin'ny +51943486400
Fisolokiana ireo zavatra ireo raha hitanao fa antsoinao hoe mihetsika izy ireo
platinina dia hoy izy:
Ary andao hojerena raha nampahafantarina anao kokoa ny fiantsoana ny tweak noforonin'ilay olona nanao ihany, fa tsy mandeha lavitra intsony, ny WhatsApp Web Enabler izay miasa tanteraka (afa-tsy amin'ny kinova Beta) dia 'scam'.
Ho an'ireo izay nanandrana izany ary tsy mandeha izy dia ampahafantariko fa ny Beta an'ny Whatsapp 2.11.17.346 ihany no miasa, ary ny Beta farany farany dia 2.12.1.43 ary namela ny fiasa izy ireo (notsapako tamin'ny Beta ilaina izany ary afaka mandefa sy mandray antso tsy misy olana).
Na izany na tsy izany, tsy hihinana ny lohako be loatra aho izao vao hanao azy io ho tsara. Amin'ny Android, ny lahasa dia heverina ho tonga amin'ny fomba ofisialy ary manome olana ihany koa na dia amin'ny fitaovana mifanaraka aminy aza. Amin'ny sasany ny lahasa tsy mavitrika, ny sasany afaka miantso fotsiny, ny sasany mahazo antso ihany ary ny hafa mahavita ny zavatra rehetra tsy misy olana. Ny lesoka dia tsy maintsy avy amin'ny mpizara WPP izay tompon'andraikitra amin'ny fanaovana antso, tsy maintsy miandry isika.
Ho an'ireo tsy manam-paharetana dia lazao fa ho solon'ny VOIP dia afaka mampiasa Skype na Viber izy ireo, izay efa niasa tanteraka nandritra ny TAONA ary toa tsy fantatry ny olona akory ny fisiany.
Valiny amin'i Platinum
Adrian ledezma dia hoy izy:
Efa nisy olona nanandrana whatsapp tamin'ny beta version 2.12.1.97 ??
Valiny tamin'i Adrian Ledezma
John chapman dia hoy izy:
Ahoana no fomba fisintomako ny kinova beta 2.12.1.97?
Valiny tamin'i John Chapman
Manana izany aho ary mandeha tsara (tsy mandeha ny tweaks toa ny WhatsApp Web Enabler na ny WhatsApp Call Enabler). Ny bug tokana hitako dia mety tsy hiseho ireo topi-maso ireo hafatra voaray teo amin'ny efijery hidin-trano, fa kosa 'hafatra avy amin'ny….'
Ity bug ity dia mitaky ny 2.12 rehetra ... saingy tsy manitsy azy ireo izy ireo. Na inona na inona apetrakao ny fikirana, dia mivoaka toy izao, raha tsy hoe misokatra ao aoriana ny fampiharana, izay mandeha tsara avy eo.
Andao hojerentsika raha ahitsin'izy ireo tsy ho ela 😉
Rodry ruiz dia hoy izy:
Manana izany amin'ny beta aho, saingy miantso ary valiako ary tsy misy tapaka
Valiny tamin'i Rodry Ruiz
Epic War TD 2, iray amin'ireo fiarovana tsara indrindra amin'ny tilikambo izay azonao atao amin'ny iPhone